CIID MUBAARAK, DHAMAAN SOOMAALIYEEY | RBC Radio	Home
Sunday, August 26th, 2012 at 02:25 am	/ 6 Comments Sunday, August 19th, 2012 at 09:39 am CIID MUBAARAK, DHAMAAN SOOMAALIYEEY
Maanta oo ah Axad kuna beegan 1-da bisha Shawaal sanadka 1433 taariikhda Hijriga, waxaa dhammaan dunida Muslimka looga dabaaldegayaa munaasabadda Ciidul Fidriga ee dhammaadka bisha barakeysan ee Ramadaan kadib markii dadweynaha Islaamka ay soo soomeen mudo 30 maalmood ah.
Wariyaasha Raxanreeb ee ku sugan gobolada dalka ayaa soo sheegaya in saaka waaberigii si weyn looga dabaaldegay dhammaan magaalooyinka Jamhruuriyada Soomaaliya iyadoo ay xusid mudan tahay in si khilaaf la’aan ah dhammaan gobolada iyo degmooyinka saaka looga ciidayo. Waxaana wararka na soo gaaraya sy sheegayaan in dadweyne iyo masuuliyiinba fagaarayaal ay saaka isugu yimaadeen si ay salaada Ciida u tukadaan.
Shabakada Raxanreeb waxay idsin soo gudbin doontaa wararka ciida ee gobolada degmooyinka dalka iyo dhulalka kale ee caalamka ee ay Soomaalidu ku nooshahay, Hadduu Alle idmo.
Markale waxaan dhammaan akhristayaasheena leenahay Ciid Mubaarak. Allow dalkii nabad nooga dhig, bulshada Soomaaliyeedna isku soo celi iyadoo mideysann oo isjecel. Allow colaada sokeeye iyo qabyaaladu ay Soomaalida ka dhamaataa kuna bedeshaan isjacayl sokeeye iyo walaalnimo. Allow dal nabad ah oo xor ah oo ay Soomaalidu u madax bannaan tahay arimihiisa.
Kullu caam wan antum bikheyr, sanadkan sanadkiisa kale ku gaara nabad iyo nolol.
Maamulka Shabakada Raxanreeb/ RBC Radio
2 Responses for “CIID MUBAARAK, DHAMAAN SOOMAALIYEEY”
CIID MUBAARAK, DHAMAAN SOOMAALIYEEY | Gubta News Network says:	August 19, 2012 at 10:09 am	[...] See the article here: CIID MUBAARAK, DHAMAAN SOOMAALIYEEY [...]
caraseedo says:	August 19, 2012 at 3:03 pm	Ciiiiiiiiid Mubaarag:Muslimiintu meel ay joogaanba,gaar ahaan dadka Soomaaliyeed,Ilaahayna waxaan waydiisanay,dembi dhaaf,nabad waarta,iyo horumar,guuuuuuuul Soomaali oo dhan.